China Makrayoni fekitori uye vagadziri | SJJ
Pretty Shiny inopa dzakasiyana siyana dzechikoro mapepa, emahofisi emahofisi kusanganisira macrayoni. Makrayoni anowanikwa pamitengo yakawanda uye zviri nyore kushanda nawo. Makrayoni haana chepfu uye anowanikwa mune akasiyana mavara. Mhedzisiro yepamusoro-soro inovaita kunyanya sutu yekudzidzisa vana vadiki kudhirowa mukuwedzera pakushandiswa zvakanyanya nemudzidzi uye nyanzvi yehunyanzvi. Ichi chakaderera mutengo wekusimudzira chipo chakakwana kune chipo panguva yemunharaunda zviitiko, tradeshows, chikoro mhemberero, uye zviitiko zvechikoro.
Pretty Shiny inopa dzakasiyana siyana dzechikoro mapepa, emahofisi emahofisi kusanganisira macrayoni. Makrayoni anowanikwa pamhando dzakasiyana dzemitengo uye ari nyore kushanda nawo. Makrayonihaina-chepfu uye inowanikwa mune akasiyana mavara. Mhedzisiro yepamusoro-soro inovaita kunyanya sutu yekudzidzisa vana vadiki kudhirowa mukuwedzera pakushandiswa zvakanyanya nemudzidzi uye nyanzvi yehunyanzvi. Ichi chakaderera mutengo wekusimudzira chipo chakakwana kune chipo panguva yemunharaunda zviitiko, tradeshows, chikoro mhemberero, uye zviitiko zvechikoro.
Uyu uchave mukana wakanaka wekusimudzira bhizinesi rako nekugadzirisa rako rekambani zita kana logo pane chigadzirwa. Taura nesu nezvemahara emifananidzo dhizaini dhizaini.
Nyore Kunyorera Ruvara, Yakachengeteka uye Isina-chepfu
Yemahara Mould Kubhadharisa Kwemazano Aripo
Assort maumbirwo, hukuru uye mavara anowanikwa
Wide Sarudzo yeNovelty Package
Yakakwana yehofisi, mudzidzi, kusimudzira kana kurongeka kwenyika
Pashure: Ball Point Pens
asiri makrayoni ane chepfu